Badda Dhimatay mala badbaadin karaa waayitaankeeda? | Saadaasha Shabakadda
Badda Dhimatay mala badbaadin karaa waayitaankeeda?
Kuleylka adduunka iyo heerkulka adduunka oo sii kordhaya dartiis, Badda Dhimatay ayaa isbadal baaxad leh ku dhacay tobanaankii sano ee la soo dhaafay. Sannadkii 1983-kii ayaa dalxiis loo furay xeebta Badda Dhimashada halkaas oo martidu ay uga bixi karaan dhismaha oo ay gaari karaan biyaha. Maanta sawirka waa ka duwan yahay. Si aad uga soo bixi karto spa meesha biyaha, waxay ku khasbanaadeen inay rakibaan tareen hal kiiloomitir labo waddo ah u mara harada.
Badda Dhimatay maku badbaadi kartaa waxyeelada ba'an ee isbedelka cimilada?
1 Badda dhimatay
2 Doogga iyo xayawaanka u nugul harada
3 Yaa mas'uul ka ah musiibadan?
4 Dhibaatada biyaha ee Bariga Dhexe
Badda Dhimatay waa meesha ugu qoto dheer dhulka dushiisa (maaha badweynta) - 430 mitir ka hooseeya heerka badda - laakiin mugga biyaha ayaa sii socda inuu hoos u dhaco. Xuduuda waxaa xadka ka leh Urdun dhanka bari iyo Israa’iil iyo Daanta Galbeed Galbeedka, baddu runtii waa haro. Heerarka biyuhu had iyo jeer way isbedelayaan. Taariikhdu waxay sheegaysaa inay xitaa sii qoto dheeraatay qiyaastii 10.000 oo sano ka hor. Laakiin hadda, heerkulka adduunka ayaa kor u kacay, halka abaaraha iyo biyaha ay ku dhacayaan heer ka sii daraya.
Badda Dhimatay waxay leedahay kala duwanaansho kaladuwan oo taageera oo horeyba ula xanuunsanaa saameynta dib u gurashada biyaha (taasoo hoos u dhigeysa qiyaastii hal mitir sanadkii). Khubarada deegaanka iyo saynisyahannadu waxay ka walaacsan yihiin in harada gebi ahaanba baaba'do haddii aan wax laga qaban si looga hortago inay tani sii socoto. In kasta oo kaliya bakteeriyadu ka badbaadi karto heerarka cusbada ee Badda Dhimatay, harada ayaa taageerta duurjoogta ku nool deegaankeeda.
Doogga iyo xayawaanka u nugul harada
Waxaa loo arkaa yaab dabiici ah, harada magaceeda waxaa ku leh xaqiiqda ah in kaliya bakteeriyada iyo qaar ka mid ah fangaska microbial ay ku noolaan karaan, tan iyo biyaheeda ku dhowaad toban jeer ayey ka cusbo badan tahay badda caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, dhir badan iyo xayawaanno, oo ay ku jiraan naasleyda sida riyaha buuraha iyo shabeelku, waxay ku tiirsan yihiin aagagga ku xeeran harada.
Cilmibaarista iyo aqoonyahannada deegaanka waxay ka digayaan in maadaama heerarka badaha ay sii socdaan inay hoos u dhacayaan, in meelaha oomanaha ah ee sii kordhaya iyo xaaladaha ay saameyn ku yeelan doonaan tirada badan ee shimbiraha tahriibka ah, ee halkaas ku joogsada sannad kasta si ay uga faa'iideystaan ​​cimilada dhexdhexaadka ah.
Yaa mas'uul ka ah musiibadan?
Waxaan indha indheynaynaa sida ay u liidato tayada iyo tirada biyaha Badda Dhimatay, laakiin yaa waxaas oo dhan u sabab ah? Khubaradu waxay xaqiijinayaan in isbeddelka cimilada uu door muhiim ah ka ciyaarayo, maaddaama oo ay sii kordhayaan heer kulka adduunka, heerka uumi baxa ayaa kordha abaarahana way sii dheeraadaan Si kastaba ha noqotee, isbeddelka cimilada maahan sababta ugu weyn ee tan. Waa waxqabad aadanaha.
Maaddaama aan lahayn xog muuqata oo ku saabsan sida isbeddelka cimiladu u saameeyo heerka uumi baxa iyo nidaamka roobka, waxaa iska cad in doorsoomaha Inta badan saameynta ay ku yeelatay hoos u dhaca heerarka badda ayaa ah isticmaalka biyaha la cabbo ee Israa’iil, Urdun iyo Suuriya.
Webiga Urdun oo mar xoog badan waa webiga ugu weyn ee bixiya aaggan iyo sidoo kale Badda Dhimatay. Asal ahaan waa mid ka mid ah marin-biyoodka weyn ee adduunka, waxayna muhiim u tahay soohdimaha Bariga Dhexe. Si kastaba ha noqotee, biyo xireenno waawayn, dhuumaha iyo saldhigyada matoorka ee loo dhisay in loo weeciyo biyaha la cabbo ayaa wabiga ka dhigay in laga dhigo biyo mareenno meelaha ku yaal. 1,3 milyan oo mitir kuyuub oo Urdun u daabulo Badda Dhimatay, 5% kaliya ayaa gaara harada.
Dhibaatada biyaha ee Bariga Dhexe
Gaar ahaan Urdun, oo ka mid ah gobollada ugu qalalan meeraha, helitaanka biyo nadiif ah ayaa ah sababaha ugu waaweyn ee isku dhaca. Badda Dhimatay waxay bixisaa biyo yaraanta ka jirta gobolka. Intaas waxaa sii dheer, dadka ku nool harada sidoo kale waxay dareemayaan saameynta dhaqaale ee Badda Dhimatay. Shirkado badan oo aagga ku yaal ayaa si toos ah ugu tiirsan, hodantinimadeeda macdanta, iyo wanaaggeeda daaweynta ee halyeeyga ah.
Warshaduhu sidoo kale waxay ka soo saaraan macdanta harada oo way sii adkaaneysaa in ganacsi la sameeyo. Xalka dhibaatadan weyn waxaa laga yaabaa inay noqoto dhismaha kanaal biyo ka qaada Badda Cas una sii mara Badda Dhimatay, sidan ayaa hoos loogu dhigi karaa heerarkiisa hoos u dhaca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Badda Dhimatay mala badbaadin karaa waayitaankeeda?
Maxaa sababa saameynta aqalka dhirta lagu koriyo?